Ny tranofiara 'The Resort' dia manolotra karazana tantaram-panahy vaovao mahatsikaiky - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny tranofiara 'The Resort' dia manolotra karazana tantaram-panahy vaovao mahatsikaiky
Ny tranofiara 'The Resort' dia manolotra karazana tantaram-panahy vaovao mahatsikaiky
by Trey Hilburn III Aprily 19, 2021
nosoratan'i Trey Hilburn III Aprily 19, 2021
Tiako ny famoronana vaovao ary nisy kely ihany tato ho ato. Ny sarimihetsika fananana sy ny toa izany dia nifandimby nidina amina toerana vaovao. Ny tranofiara ho an'ny The Resort dia toa manao toy izany koa amin'ny endrika endrika matoatoa andrana sy tena izy. Ity iray ity dia toa manambatra tantaram-panahy matoatoa miaraka amina entana kely fananana miharo kely ihany koa.
Ny synopsis ho an'ny The Resort mandeha toy izao:
Lex dia mpanoratra iray variana amin'ny paranormal. Ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany, nanapa-kevitra ny namany akaiky telo an'i Lex fa hitondra azy hanao dia tampoka any amin'ny toeram-pialan-tsasatra nilaozan'ny Hawaii. Ilay toeram-pialan-tsasatra dia heverina fa anaran'ny matoatoa ratsy laza, The Half-Faced Girl, ary tapa-kevitra ny hahita azy i Lex. Rehefa tonga eo amin'ny nosy izy ireo dia mahita toeram-pialofana malalaka sy tsara tarehy ary foana. Tahaka an'i Lex nanapa-kevitra fa angano an-tanàn-dehibe fotsiny io dia manomboka manjavona tsirairay ireo namany, ary mamela azy ho azon'ny fanahy ratsy.
The Resort mivoaka amin'ny 30 aprily amin'ny teatra voafantina sy amin'ny VOD.
Inona no hevitrareo lehilahy momba ilay tranofiara The Resort? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Deep Blood dia avy any Severin ary manome anao Jaws rip tsy misy zavatra hitanao. Zahao eto ny tranofiara.
Trey dia nihalehibe teo anelanelan'ny lalantsaran'ny fivarotana video. Taorian'ny filaharana nahazo aingam-panahy Cronenbergian, nanjary nifangaro tamin'ny lalao sarimihetsika sy horonan-tsary izy. Manoratra ny zava-drehetra kolontsaina pop izy, ary nandoka antsantsa roa tsy nahy ary niaina. Omeo mpanaraka azy izy ary apetraho azy zavatra tsy dia tsara loatra @TreyHilburn.
Ny tranofiara 'Deep Blood' dia manome anao valanoranom-bolo, tsy toy ny zavatra noeritreretinao ho azo atao
Sarimihetsika mivantana 'Rock' Em, Sock 'Em Robots' miasa miaraka amin'i Vin Diesel